प्रख्यात चिकित्सक डा.उपेन्द्र देवकोटाको अवस्था गम्भीर -लण्डनमा उपचार हुँदै , – www.agnijwala.com
प्रख्यात चिकित्सक डा.उपेन्द्र देवकोटाको अवस्था गम्भीर -लण्डनमा उपचार हुँदै ,
प्रख्यात चिकित्सक डा.उपेन्द्रदेवकोटाको अवस्था गम्भीर -लण्डनमा उपचार हुँदै
प्रख्यात चिकित्सक डा. उपेन्द्र देवकोटा गम्भीर बिरामी पर्नु भएको खबर छ । विशेषगरी ‘न्युरो’सम्बन्धी उपचारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति कमाउनुभएका डा. देवकोटा दुर्लभ प्रकारको क्यान्सरबाट पीडित हुनुभएको उहाँनिकट सुत्रले जनाएको छ ।
यतिबेला लण्डिनस्थित एक अस्पतालमा उपचाररत डा. देवकोटाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
गत मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनमा डा. देवकोटाले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा मत माग्न सक्रियता दर्शाउनुभएको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उहाँले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो ।st weatherinformus.ruyoutube идеохостингпроверка уникальности текста advegoвсе спортивные результатыwebcam girls for free